Dagaalo Xoogan oo maanta ka dhacay Magaalada Muqdisho Xarunta Dalka – SBC
Dagaalo Xoogan oo maanta ka dhacay Magaalada Muqdisho Xarunta Dalka
Posted by Webmaster on Maarso 30, 2012 Comments
Dagaalo aad u culus oo u dhexeeya ciidamada DKMG ah ee Soomaaliya oo ay isgarabsanayaan kuwa Midowga Africa ee Amisom iyo Xarakada Shabaab Almujaahidiin ayaa maanta ka dhacay Duleedyada magaalada Muqdisho Xarunta Dalka Soomaaliya.
Dagaaladan ayaa waxay ka dheceen deegaanada Dayniile iyo duleedka Ceelasha Biyaha ee magaalada Muqdisho waxaana la isku adeegsaday Hubka noocyadiisa kala duwan oo kuwa culus iyo kuwo Fuduba leh.
Dhinacyada dagaalamaya waa DKMG ah ee Soomaaliya iyo Xarakada Alshabaab ayaa war ka soo saaray dagaalkan kaasi oo ay ku kala sheeganayaan guulo uu midba midka kale ka gaaray.
Saraakiil sar sare oo ka tirsan ciidamada DKMG ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ay ciidamadooda iyo kuwa Amisom gaareen Isbitalka Degmada Deyniile halka xoogaga Alshabaab saraakiil u hadlayna ay sheegeen in ay halkaasi isagaga difaaceen ciidamada DKMG ah.
Ilaa iyo hada ma jiraan warar la isku haleyn karo oo qeexaya inta uu la egtahay khasaaraha ka dhashay dagaaladan maanta ka dhacay Muqdisho,balse waxaa la rumeysan yahay in ay jiraan khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo soo kala gaaray labada dhinac ee dagaalamaya iyo dadka rayidka ah.
Sida la ogtayahay dagaalka ayaa waxaa qaaday ciidamada DKMG ah iyo kuwa Amisom kaasi oo ay ku macneeyeen in uu ka mid yahay howlgalo loogaga ciribtirayo xarakada Alshabaab Magaalada Muqdisho waasida ay hadalka u dhigeene.
Dhinaca kale Waxaa xiran isusocodka dadka iyo gaadiidka deegaanka Ceelasha Biyaha iyadoona aana ay labada dhinac ku dagaalamayaan Ex Control oo ah afaafka hore ee magaalada loogaga boxo waxyarna u jirta Deegaanka Ceelashada biyaha.
Sikastaba ha ahaatee maalmihii aynu soo dhaafnay ayaa waxaa soo baxayay Qorshe yaal ay soo bandhigayaan ciidamada Amisom iyo Dowlada KMG ah kaasi oo ay ku damacsanaayeen in laga howlgeliyo ciidamada Amisom qeybo ka mid ah gobolka Shabeelaha hoose ayna soconayaan abaabulo la doonayo in ciidamada ay weerar ku qaadaan deegaanada ay xarakada Alshabab ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeelaha hoose gaar ahaan inta soo xigta magaalada Muqdisho.
SBC Internatoinal Muqdisho.